Xisaabtu waxay kuu noqon doontaa saaxiibkaaga ugu wanaagsan dib-u-dhaca RPG Xisaabta iyo Sixirka | Androidsis
que farxad inaad nalahesho xisaabta iyo sixirka ciyaarta retro RPR, cinwaan aad ku hagaajin doontid xisaabtaada adigoo adeegsanaya howlo kala duwan oo aasaasi ah. Qaar ka mid ah hawlgallada aasaasiga ah sida ku darista oo maskaxdaada jimicsi siin doonta ayaa kuu oggolaan doonta inaad soo celiso awoodda xisaabinta xisaabeed ee kaa lumay taleefoonnada gacanta iyo kombuyuutarrada awgood
Waana Xisaabta iyo Sixirku inay u taagan yihiin oo keliya awooddeeda aynnu ugu xisaabtami karno xisaabta maskaxdeenna, laakiin sidoo kale waxay leedahay hadiyado kale ama qiimayaal aad u soo jiidasho leh sida naqshaddii weyneyd ee loo sameeyay dib-u-celinta. Farshaxan pixel ah oo qurux badan oo isku dhafan oo leh dhammaan taariikhda doorka ciyaarta ee ciyaarta bilaashka ah ee Android.
1 By Crescent Moon Games
2 Higgaadinta ku darista iyo ka-goynta
3 Xisaabta iyo Sixirka iyo xisaabtooda
Xisaabta iyo Sixirka waxay ka timaadaa Crescent Moon Games, oo ah istuudiyaha ciyaarta fiidiyowga ee dambiga ku leh cinwaannadii ugu dambeeyay sida Molli Pop iyo indhaha Marginalia Geesi. Khubaro ku ah dib u eegida tiro badan oo ka mid ah ciyaartooda, ee Xisaabta iyo Sixirka ayaa baarka mar kale aad u sarreeyay inaad yeelato garaaf garaaf ah oo ah aúpa.
Taasina waa in mid kasta oo ka mid ah pixels-ka Xisaabta iyo Sixirka ay u taagan tahay si mobilka leh shaashadda AMOLED, sida ZTE Axon 9 Pro, eeg weyn si aad u siiso khibrad ciyaareed weyn.
Xisaabta iyo Sixirka ayaa noo keenay sheeko ay Tiri Mathula wuxuu xaday buuggii xisaabta ee weynaa iyo Sixir. Kaliya waad awoodi doontaa inaad soo celiso, maaddaama aad khabiir weyn ku tahay xisaabta mahadnaqna awoodda maskaxdaada waxaad awoodi doontaa inaad baabi'iso cadawga aan dhammaadka lahayn ee kugu soo socda. Qisadan waxaan ku bilaabaynaa xisaabtankayaga xisaabta iyo Sixirka.
Higgaadinta ku darista iyo ka-goynta
Xisaabta iyo Sixirka waxaan haynaa waxae barto sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah wax loogu daro si aan ugu haboono tirada ugu badan ee dhibcaha garaacista markasta oo aan cadaw ama dhowr garaacno. Taasi waa, ka dib markii aan ku xulanayno sixirka mid ama in ka badan oo cadaw ah, waxaan heysanaa waqti go'an oo ay ku soo baxayaan lacag xisaabeedyo kala duwan oo aan xallin karno.
In badan oo aan xallinno waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah, ayaa sii kordhaya dhaawaca aan u geysaneyno cadawga. Marka xawaaraha fikirka ayaa muhiim u ah in laga baxo qaar ka mid ah cayda aan ku heli doonno Xisaabta iyo Sixirka. Kaliya maahan inay noqdaan lacag, laakiin waa inaan codso kala-goyn, isku dhufasho iyo isu-qaybin. Afartaan hawlgal xisaabeed waxaan ku geyn karnaa suurtagal weyn oo waxyeelo ah cadawgaas aan wali garanayn waxa ku dhacaya.
Waxaan jidkayaga ka heli doonnaa saaxiibo kala duwan oo ku dari doona xirfado kala duwan iyo dhibco dheeri ah. Waxaan bilaabi doonaa oo leh dameer baashaal iyo saaxiibtinimo leh taas ayaa ina siin doonta dagaalkeenna. Halka kuwa kale ay daryeeli doonaan caafimaadka, weerarka iyo nolosha. Waxaan heli doonnaa fursad aan ku xulanno asxaabteena ka hor inta aan la bilaabin dagaalka.
Xisaabta iyo Sixirka iyo xisaabtooda
Waxaan sidoo kale heysanaa tiro wanaagsan oo heerar ah si aad markale macalin macalin ugu noqon karto xisaabta. Runtuna waxay tahay in muuqaalka weyn ee Crescent Moon Games la Xisaabta iyo Sixirka runtii halkan joogo. Ciyaar soo celin doonta rabitaankii ku darista iyo in kuwa waqti fiican ku soo qaatay xisaabta, waxay noqon doontaa ciyaar weyn oo lagu raaxeysto.
Farsamo ahaan Xisaabta iyo Sixirka si heer sare ah ayaa loo soo saaray. Aad ayey u muuqataa heshiiska weyn ee la siiyay farshaxanka pixel oo leh muuqaal gadaal ah oo ka mid ah kuwa wanaagsan. Sidoo kale naqshadeynta dabeecadda ayaa ah guul leh waxyaabo aad u fiican sida halyeeyada ama dameerka oo bilaabi doona tacaburkeena. Inta soo hartay waxay u heellan tahay waxqabad weyn iyo ciyaar guul leh.
Xisaabta iyo Sixirka ayaa ku cusub Ciyaaraha Bisha Cas markaa ha iloobin inaad ku darto, ka jarto oo aad ku dhufato sidaad u siman tahay oo aad u disho kumanaan cadaawayaal ah oo wata RPG dib u habeyn sare leh. Waxaan rajeynayaa in ciyaaro badan ay soo baxaan sidaa darteed wax ku baro adigoo ciyaaraya.
Xisaab iyo sixir
Daaweyn muuqaal ah oo aad u fiican farshaxanka pixel
Ku hagaaji xisaabta adoo ciyaaraya
Hagaajinta xirfadahaaga xisaabta wax ma ka soo horjeedaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ku hagaaji xisaabtaada adigoo ku ciyaaraya RPG xisaabtiisii ​​hore iyo sixirka